कांग्रेस महोत्तरीको क्षेत्रीय अधिवेशनमा अझै किचलो
पाैष ३०, २०७८
महोत्तरी । विवादका कारण महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३ को स्थगित भएको अधिवेशनमा पुरानो नै अडान दोहोरिएको छ । संस्थापनइतरका रामचन्द्र पौडेल र विमलेन्द्र निधि प्यानलबीच अधिवेशन गराउन भएको निर्वाचन स्थलको विवादले पुनः अधिवेशनका सम्बन्धमा शंका उत्पन्न भएको हो ।
‘केन्द्रीय माहाअधिवेशनमा सहभागी हुन नपाएपछि अधिवेशन नभए पनि हुन्छ भन्ने मनसायले केही नेताहरू अधिवेशन नै हुन नदिने षडयन्त्रमा लागेका छन्’, जिल्ला सचिव शम्भु पाठकले भने । आपसी विवादका कारण क्षेत्रको अधिवेशन स्थगित भएपछि केन्द्रीय महाअधिवेनमा भाग लिन नपाएका नेताहरूमा अहिले ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ ।
निर्वाचन पिपरामा गराउने कि जलेश्वरमा गराउने विवादलाई लिएर सहमति जुटन नसक्दा छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । विमलेन्द्र निधि पक्षले निर्वाचन पिपरामा नै गराउनुपर्ने र रामचन्द्र पौडेल पक्षको सुरक्षित वातावरणको लागि भए पनि सदरमुकाम जलेश्वरमा नै निर्वाचन गराउनुपर्ने अडान छ ।
जिल्ला अधिवेशन गराउनुभन्दा पहिला विवादित क्षेत्रीय र वडा अधिबेशन गराउनुपर्ने भन्दै जिल्लाका पूर्व महासचिवसमेत रहेका बजरङ्ग नेपालीले भोकहडताल सुरु गरेका थिए ।
नेता नेपालीको भोकहडताललाइ मध्यनजर गर्दै नेपाली कांग्रेसले ३ माघभित्र अधिवेशन गराउन निर्देशन दिए पनि नेताहरूको विवादले पुनः समस्या सिर्जना बनिरहेको कांग्रेस जनाएको छ ।
केन्द्रबाट नै निर्वाचनस्थल समेत निर्धारण गरे विवाद सुल्झाएमात्र क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने नेताहरूको आंकलन छ । तर, केन्द्रबाट अधिवेशनको लागि मिति निर्धारण भए पनि विवादित निर्वाचनस्थलको विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
विवाद सुल्झाउन पटक–पटक नेताहरू छलफलमा बसे पनि दुई पक्षबीचको अडानले अधिवेशन बिथोलिँदै आएको छ । सुरुदेखि नै निधि निकटका नेताहरू मनोज झा, रामु यादव र रागबेन्द्र झाले सभापतिको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । मनोज झा र रामु यादव विमलेन्द्र निकट मानिन्छन् भने रागवेन्द्र झा रामचन्द्र पौडेल निकट मानिन्छन् ।
क्षेत्रीय अधिवेशन हुन नदिन पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र तिवारी लगायतका नेताहरू लागि परेको संस्थापनइतरका निधि पक्षको आरोप छ । पिपरा गाउँपालिकामा नै अधिवेशन गराउनुपर्ने पौडेल पक्षको अडान रहे पनि छलफलकै क्रममा दुई पक्षबीच झडप हुँदा अर्को पक्षले निर्वाचन जलेश्वरमा नै हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
‘हामीभित्र अब एउटै विवाद बाँकी छ कि निर्वाचन स्थल सुरक्षित वातावरणमा होस्’, सचिव पाठकले भने । विवाद कै कारण कांग्रेस महोत्तरीमा क्षेत्र नम्बर ३ र मनरासिस्वा नगरपालिकाको एउटा वडाको अधिवेशन बाँकी छ भने कसैले पनि महाअधिवेशनमा भाग लिन पाएका थिएनन् ।
सरकारी अस्पतालमा भन्दा केएमसीमा उपचार गर्न सस्ताे
डा. सुनिल शर्मामाथि सिंहदरबार भित्रै दुर्व्यहारको प्रयास, ५ जना पक्राउ
सबै मेडिकल कलेजहरुमा ताला लगाएर सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी
जहाँ प्रत्येक वर्ष ४ सय ४० विद्यार्थी छात्रबृत्तिमा पढिरहेका हुन्छन्
नेकका चार विद्यार्थीलाई स्पेनको विश्वविद्यालयबाट आकर्षक छात्रबृत्ति
काठमाडौं मेडिकल कलेज र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति, विद्यार्थी भर्ना सुरू
Jan,20,2022Jan 29, 2018
उपत्यकामा शुक्रबार रातिदेखि सबै सवारी साधनमा जाेरविजाेर प्रणाली
न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ र चिकित्सा शास्त्रमा छात्रबृत्तिमा अध्ययनकाे अवसर
त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे परीक्षा स्थगित
सप्तरीमा ३३ जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा ३० जनामा कोरोना पुष्टि
मधेश प्रदेशमा एमाले र लोसपाको गठबन्धन
नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभावले वर्षा र हिमपात
नेपालले विश्वकप खेल्दा क्रिकेट सुरु गरेका लोकेशको राष्ट्रिय टोलीसम्मको यात्रा...
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ७९४/०७७/०७८ सूचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता नं. २३१०/०७७/०७८ ह्वाइटलाईन मिडिया प्रा.लि.का लागि अध्यक्ष तथा प्रकाशकः अप्सरा अधिकारी सम्पादकः लक्ष्मण पराजुली प्रबन्ध–निर्देशकः केशब सापकोटा सम्पर्कः ह्वाइटलाइन मिडिया प्रा.लि., काठमाडौं–७ फोन नं. ०१–४४३८५३१, ९८६३२४५७७५ इमेलः समाचारका लागि: info@actionkhabar.com, actionkhabar2077@gmail.com विज्ञापनका लागि: whitelinemedia077@gmail.com Please visit us: www.actionkhabar.com
© 2022 NextAussietech All Rights Reserved.